Authentic Brand တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ | Martech Zone
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မားကတ်တင်းဂုရုများက ၎င်းကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသော်လည်း လက်ရှိစျေးကွက်သည် လူသားအမှတ်တံဆိပ်များအပေါ် ဗဟိုပြုသည့် သီအိုရီများ၊ ကိစ္စများနှင့် အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများဖြင့် ရင့်မှည့်နေပြီဟု အားလုံးက သဘောတူကြသည်။ ဤကြီးထွားလာနေသောဈေးကွက်အတွင်း အဓိကစကားလုံးများဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် လူ့အမှတ်တံဆိပ်s.
မတူညီသော မျိုးဆက်များ- အသံတစ်ခုတည်း
မားကတ်တင်းလုပ်ငန်း၏ Grand Old Men မှ Philip Kotler က အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို အမည်တပ်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး 3.0. အမည်တူသူ၏စာအုပ်တွင် သူသည် "လူ့စိတ်ပူပန်မှုများနှင့် ဆန္ဒများကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်" ဟူသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူများကို ရည်ညွှန်းသည်။
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ အသံသည် ဆက်သွယ်ရေးဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ရှေ Godin၎င်းက "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များဖြင့် spam များကို မပြုလုပ်လိုတော့ပါ။ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားလိုပါသည်။ လူသားဖြစ်ခြင်းသည် အောင်မြင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။" သူ့ရဲ့ နာမည်ကြီး ရွှေစက်ဝိုင်း မော်ဒယ်လ် နဲ့ TED Talks ၊ ရှိမုနျကို Sinek ထောက်ပြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ထောင်သည့်အခါတွင် ကုမ္ပဏီသည် ဤပလပ်ဖောင်းမှ မည်သည့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုမဆို ရောင်းချနိုင်စေရန် ခိုင်မာမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
မတူညီသော မျိုးဆက်များနှင့် အစပြုသည့်အချက်များကြားမှ ထူးချွန်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပညာရှင်များအားလုံးသည် တူညီသောအရာကို ပြောဆိုနေကြသည်- လူ့အမှတ်တံဆိပ်များ.
ဘယ်အရာကမှ အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီများအတွက် စစ်မှန်မှုကို ရှာဖွေရန်မှာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ - ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ခံသူများကို နားထောင်ကာ ၎င်းတို့၏ အမှားများကို ဝန်ခံခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များအား ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန် ကြိုးစားခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ အချိန်တိုင်းကို ဖြုန်းတီးခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ အမှားများကို ဝန်ခံရန် ကုမ္ပဏီများအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေ။
ပါရာဒိုင်းအပြောင်းအရွှေ့ အစရှိတဲ့ သုတေသနတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Lippincott-LinkedIn အမှတ်တံဆိပ်ပါဝါရမှတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ထိခိုက်လွယ်သော၊ လူသားဆန်သောချဉ်းကပ်မှုကို သုံးစွဲသူများက ကောင်းစွာလက်ခံကြောင်း သက်သေပြရန် သက်သေပြရန်ဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ စားသုံးသူများသည် ကျွမ်းကျင်သူများ ချမှတ်ထားသော ခန့်မှန်းချက်များကို ကျော်တက်သွားခဲ့ပြီး လူသားစျေးကွက်တွင် ငြင်းမရအောင် ရှေ့သို့တိုးလာခဲ့သည်။
မေးခွန်းက ဒီလိုပါ- မင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်သလား။
စစ်မှန်သော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုသည် ပျော့ပျောင်းသော လေထုထဲမှ ထွက်ပေါ်လာရုံမျှမက။ အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများသည် အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပူးပေါင်းဖန်တီးမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ လူစုလူဝေးရှာဖွေမှု၊ သင်ယူမှုအမှတ်တံဆိပ်၊ အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းစသည့် နှစ်များတစ်လျှောက် ၎င်းကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော် အရာနှစ်ခုသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပါရာဒိုင်းပြောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်-
1. စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် အမှတ်တံဆိပ်များမဟုတ်ဘဲ လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖော်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်သည် ကုမ္ပဏီများအပေါ်တွင် ဗဟိုပြုပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် တုံ့ပြန်မှုအပေါ် သတိရှိပြီး တသမတ်တည်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြားချပ်ချပ်အမှတ်တံဆိပ်များထက် အကျိုးပြုသော လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်လာသည်။
ယူ Pepsi ၏ ဘရာဇီးလ် Toddy နမူနာအဖြစ် လှုံ့ဆော်မှု
ဘရာဇီးမှာ အရောင်းသွက်တယ်။ ကလေး ချောကလက်ဖျော်ရည်များ ရပ်တန့်သွားပြီး စျေးကွက်တွင် အသစ်အဆန်းများကို တောင်းဆိုလာကြသည်။ Pepsi သည် အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သော စားသုံးသူများ၏ အပေါ်ယံအဆင့်တွင် အလွန်အထင်ကြီးခံရသော Mascot တစ်ဦးရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သူတို့က သူ့ကို ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ဖျော်ဖြေမှုလို့ မှတ်ယူကြတယ်၊ အဲဒါက အမှတ်တံဆိပ် mascots တွေကို သဘောကျတယ်။
Pepsi သည် ခြေလက်အင်္ဂါပေါ် ထွက်လာပြီး ၎င်းတို့၏ mascot ကို ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုအတွက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pepsi သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ပြင်းထန်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားသည် ဤလှုပ်ရှားမှုကို ရှေ့သို့သယ်ဆောင်ကာ အရေးယူမှုနည်းသော ထုတ်ပြန်ချက်များအဖြစ်များလာမှုကို အာရုံစိုက်နေကြသည်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ကျိုးပဲ့ပြီး အချည်းနှီးသော ကတိများများဖြင့် လက္ခဏာဆောင်သော နိုင်ငံကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည် mascot များထဲမှ ကြေငြာချက်ထုတ်ရန် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှု ပဏာမခြေလှမ်းများကို အသုံးပြုကြောင်း Pepsi မှ အကြံပြုခဲ့သည်။ Moo အချည်းနှီးသောကတိစကားကြားတိုင်း - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
အချိန်မရှိ၊ Moo synonymous ဖြစ်လို့ပါ။ crap ကိုဖြတ်ပါ။. မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Moo- အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်း နှစ်မျိုးလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ စကားဝိုင်းများတွင် မက်ဆေ့ချ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို၊ Toddy သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်ရောင်းအား မြင့်တက်လာပြီး Pepsi သည် ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
2. ဖောက်သည်မှ လူသားဆီသို့ အာရုံပြောင်းပါ။
ကမ်ပိန်းများ၊ ဗျူဟာများ၊ လှည့်ကွက်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော လက်ခံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် နည်းလမ်းများကို အာရုံစိုက်မည့်အစား၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် လူတို့ဘာကြောင့် ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအပေါ် တဖြည်းဖြည်း အာရုံစိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အစပြုသည့်အချက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည် လူများ (ဖောက်သည်များမဟုတ်) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်များအကြောင်း အကြောင်းရင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်-
ပါရာဒိုင်းအပြောင်းအရွှေ့၏ ဤဒုတိယရှုထောင့်၏ ဥပမာကို အမေရိကန်ကွင်းဆက် Dominos တွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အမိုက်စားများအစတွင်၊ Dominos သည် အစားအသောက်အရည်အသွေး၊ အလုပ်သမားစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် အလုပ်သမားပျော်ရွင်မှုအတွက် မီးလောင်ခံနေရသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖောက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရန် ကာကွယ်ရေးနှင့် လှုံ့ဆော်မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်မည့်အစား၊ Dominos သည် နှိမ့်ချပြီး တုံ့ပြန်မှုရှိသော အကျပ်အတည်းဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Dominos သည် ၎င်းတို့၏ ပီဇာသေတ္တာအများအပြားကို QR ကုဒ်များဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး သုံးစွဲသူများက ကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ကာ ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို Twitter သို့ ယူဆောင်သွားစေရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဤသည်မှာ အောင်မြင်သောဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လူအားလုံးကြားသိနားလည်ရန်လိုသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နည်းဗျူဟာသည် ကုမ္ပဏီမှ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာအမြောက်အမြားစုဆောင်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်-
၎င်းတို့၏ ပြင်ပစျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်၊ ဒိုမီနိုသည် Times Square ကြော်ငြာဘုတ်များအပါအဝင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဈေးအကြီးဆုံး ကြော်ငြာနေရာအချို့ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။အားလုံးက ဤဖောက်သည် tweets များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသရန်သာဖြစ်သည်။ ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို မြှင့်တင်ရန် မကောင်းသော သုံးသပ်ချက်များကိုပင် ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Dominos သည် အသံပို၍နားထောင်လိုကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဝန်ထမ်းစောင့်ရှောက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Dominos သည် မုန့်ဖုတ်သမားများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်ရန် ပီဇာများထုတ်လုပ်သည့်နေရာများတွင် ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်များကို တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ ယင်းက ဝန်ထမ်းများနှင့် ဖောက်သည်များကြား ကွာဟချက်ကို ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းကူးပေးသည်။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသည် တစ်လအတွင်း Twitter Follower 80,000 တိုးလာခဲ့သည်။ အခြားရလဒ်များတွင် PR အာရုံစူးစိုက်မှု တိုးလာခြင်း၊ အလုပ်သမားများ စိတ်ကျေနပ်မှု တိုးလာခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်၏ ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မှုနှင့် လူသားဆန်မှု တိုးလာခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးတွင် စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်သည်။
ကတိပေးသော Marketing သည် လုံလောက်ပါသည်။
စစ်မှန်သောစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၏အားသာချက်များကိုသူတို့မျက်စိဖွင့်ထားသောကုမ္ပဏီများ၏အံ့ဖွယ်ဥပမာများစွာရှိသည်။ ရလဒ်မှာ ဖောက်သည်များနှင့် ကောင်းမွန်စွာနေနိုင်သော ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ကမ်ပိန်းများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ MarTech ကုမ္ပဏီတွင် JumpStory ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော စတော့ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို ပြုပြင်ဖန်တီးရာတွင် အထူးပြုထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် အပြင်တွင်ရှိသော ချိုမြိန်သော ရုပ်ပုံအားလုံးကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန် AI ကိုအသုံးပြုပြီး စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အနှစ်သာရဖြစ်သည့် လူသားဆန်မှုနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပါသော့ချက်စကားလုံးနှစ်လုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်။
ဤကိစ္စများသည် သင့်အား ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိပြီး လူ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရန် လှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဤအကူးအပြောင်းတွင်၊ လမ်းတစ်လျှောက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် လက်လီဆိုင်ခွဲတစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ လူကြိုက်အများဆုံး ထုတ်ကုန်များ မကြာခဏ ကုန်သွားခြင်းကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ဤဝေဖန်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဆောင်ပုဒ်အသစ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး အတွေးအမြင်သစ်တစ်ခု၊ စတော့မှာရှိရင် ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ ဤအမာခံကိုယ်ကျိုးရှာအထေ့အငေါ့သည် အရောင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သတင်းနှစ်ခုစလုံးအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင် ကြွေးကြော်သံအောက်တွင် ကြော်ငြာထားသော တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ဆိုင်ခွဲတစ်ခုကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ မူရင်းအစားအစာ။ အင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်။ ဤဟာသနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထေ့ငေါ့ခြင်းအပြင်၊ ပန်ကာလိုင်းသည် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွင်း ဂန္ထဝင်ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ထင်ရှားစေသည်။ စစ်မှန်မှုကို ရှာဖွေနေသည့် ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက် အဆိုးဆုံးမှာ အပြည့်အဝ ဒိန်းမတ်ဆာဗာမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်သာ အီတလီ စားသောက်ဆိုင်သို့ သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လိုချင်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပီဇာများကို စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ကျွေးမွေးရန် ချိုမြိန်သော အလှတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီနူးရှိ စကားလုံးတိုင်းကို နားလည်နိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်စေလိုပါသည်။ စစ်မှန်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးဖြစ်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံ ယင်းက ခက်ခဲသည်။ တရုတ်ကွင်းဆက်သည် ဤအကျပ်အတည်းကို အတိအကျဖော်ပြပြီး ယင်းကိစ္စကို ရပ်တည်သည်။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးသည် ထိုဖြစ်စဉ်၏ ဥပမာများဖြစ်သည်။ .ရာဝတီ dubs ချို့ယွင်းချက်. အခေါ်အဝေါ်သည် စကားလုံးများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်သော နှင့် ချို့ယွင်းချက်. Dove's Real Beauty campaigns ကဲ့သို့ပင်၊ ဤအမေရိကန် ကိစ္စနှစ်ခုတွင် သင်သည် သင်၏ လူသားဆန်မှုကို စူးစမ်းနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် သင့်ကတိများကို အမှန်တကယ် ရရှိနိုင်သော သူများကို ကန့်သတ်ကြောင်း ပြသပါသည်။ တကယ်တော့၊ ဒီကြိုးတွေက သူတို့ကမ်းလှမ်းတာထက် ပိုနည်းတယ်လို့ ကတိပေးလုနီးပါးပါပဲ။
သီအိုရီအရ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးတွင် လူသားများကဲ့သို့ပင် ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိသည်။ အချို့သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသည် အခြားသူများထက် ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိကြောင်း အမှန်ပင်။ အချို့က အပြုသဘောဆောင်သော၊ အစွန်းရောက်သောနည်းဖြင့် ထင်ရှားသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းပြချက်အတိအကျကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး အခြားအရာများတွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီနိုင်လောက်အောင် လိမ်လည်နေပုံရသည်။
မားကတ်တင်းလောကတွင် ဤဖြစ်စဉ်၏ သိသာထင်ရှားသော ဥပမာအချို့ရှိသည်။ Miracle Whip သည် ၎င်းနှင့်အတူ ထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ ဇာတ်လမ်း; Innocent Drinks များသည် ဟာသနှင့် ပြတ်သားစွာ ကျော်ကြားသည်။ ဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ ဥပမာတစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ ဖျော်ရည်ပုံးအများစု၏ အောက်ခြေတွင် တွေ့နိုင်သည့် စာသားဖြစ်သည်၊ ငါ့အောက်ခြေကို မကြည့်တော့ဘူး။.
USA မှာဆိုရင် Southwest Airlines ကို လူအများစုက သိကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည် လုံခြုံရေးကြေငြာချက်များ တူညီခြင်းမရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသည့် မူဝါဒကို ချမှတ်ထားသည်။ YouTube သို့သွား၍ လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာသည့် လုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတစ်ဆင့် လေယာဉ်အမှုထမ်းငယ်တစ်ဦး၏ လမ်းကို ကယောင်ကတမ်းလုပ်နေသည့် ဥပမာကို ကြည့်ပါ။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ovation ဖြင့် ဤချဉ်းကပ်နည်းကို လက်တွေ့ကျကျ မည်သို့ လိုက်နာသည်ကို သတိပြုပါ။
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့၏ smoothie ပုလင်းများ၏အောက်ခြေကို မကြည့်ရသေးပါက ယခုအချိန်သည် ချောင်းကြည့်ရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ pic.twitter.com/tsw2Fs8WD1
- အပြစ်မဲ့အချိုရည် (@innocent) နိုဝင်ဘာလ 20, 2013
လူသားဆန်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း။
လူသားဆန်မှုသည် ဖောက်သည်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် စာနာစိတ်တို့ကို ရွှေ့ရန် စွမ်းအားရှိသော လက္ခဏာအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သောဘောင်များအတွင်း အမှန်တကယ် ပေးဆောင်သည်။
လူသားဆန်မှု ပြေပျောက်စေရန်အတွက် ၎င်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပန်းတိုင်ကို ဦးတည်သည့်ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အပြောင်းအလဲ လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးပြီး လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် နောက်ဆုံးတွန်းအားပေးမှုကို ပေးသည်။
ဤအလုပ်အား တွန်းအားပေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဤမေးခွန်းလေးခုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ပိုကျယ်လောင်စွာ နားထောင်နိုင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည် အဘယ်အရာက လူသားဖြစ်စေသနည်း။
ဤမေးခွန်းများကို ဗဟိုပြု၍ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ လူသား၏ဗျူဟာ၊ ပလပ်ဖောင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မတူညီသော ကန့်သတ်ဘောင်များနှင့် တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကံကောင်းပြီး လမ်းတစ်လျှောက် ပျော်ရွှင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Tags: စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှတ်တံဆိပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တရုတ်အစားအစာဒိုမီနိုချို့ယွင်းချက်မားကတ်တင်းလူကြီးများဘယ်လိုလူ့လူ့အမှတ်တံဆိပ်များလူ့အာရုံလူသားအပြစ်ကင်းသောအချိုရည်များဇာတ်လမ်းlinkedin အမှတ်တံဆိပ်ပါဝါရမှတ်lippincottlippincott-linkedin အမှတ်တံဆိပ်ပါဝါရမှတ်3.0 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမျက်နှာဖုံးအံ့ဖွယ်သောကြာပွတ်Mooမူရင်းအစားအစာက အင်္ဂလိပ်လိုညံ့တယ်။Pepsipepsi ပူးတွဲပုဂ္ဂိုလ်philip KotlerQR Code ကိုseth godin ပါSimon sinekလူမှုမီဒီယာted စကားပြောနှစ်ထပ်ကိန်းကတုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း။
Jonathan Low သည် ဒိန်းမတ်၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် စီးပွားရေးစာရေးဆရာများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Løw သည် ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ JumpStory"Netflix of images" ဟုခေါ်သော AI အခြေခံစတော့ဓာတ်ပုံပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ JumpStory သည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း 150 ကျော်တွင် ဖောက်သည်များရှိနေပြီး လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလျက်ရှိသည်။